စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားနာတဈကောငျ (အပိုငျး တဈ) – Kyaw Zaw Oo's Blog
October 30, 2012 March 13, 2019 kyaw zaw oo
စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားနာတဈကောငျ (အပိုငျး တဈ)
[💛 standard version | 💙 zawgyi version]
Written by Kyaw Zaw Oo
စဈတှေ၊ ၃၀ နိုဝငျဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခနျးဆကျ အတ်ထုပတ်တိ ]
အခနျး (တဈ) ဘဝမှာ အခါခါ လကျနကျခရြသူ
ဖစျေ့ဘှတျပျေါက အကျဆေးဟနျ စာစုတဈခုကို မကွာခငျက ဖတျလိုကျရသေးတယျ။ စာစုရဲ့ နာမညျက “လကျနကျခြ” တဲ့။
ဦးနဝေငျးအစိုးရဆီမှာ လကျနကျခခြဲ့တဲ့ တောခို သူပုနျဟောငျး တဈယောကျ ဟာ တဈခါ လကျနကျခရြုံနဲ့ မပွီးပဲ တျောလှနျရေးကောငျစီ တဈဖွဈလဲ မဆလအစိုးရကို ဟိုမှာနညျးနညျး ဒီမှာနညျးနညျးဆိုသလို အစိုးရကို လိုကျကူ ပေးနခေဲ့ရပုံ အဖွဈမှနျကို အကဉျြးသဘောရေးထားတယျ။
သူပေးခငျြတဲ့ မကျဆခြေျ့က ဒီလိုပါ။ လူဆိုတာ တဈခါလကျနကျခလြိုကျရငျ ပထမဆုံး တဈခါထဲတငျ လကျနကျခရြတာ မဟုတျဘူး၊ ဘဝမှာ အခါခါ လကျနကျခြ ရတတျတယျတဲ့။
လှနျခဲ့တဲ့ သုံးနှဈကြျော ကြှနျတျော အာဖဂနျနစ်စတနျက ပွနျလာခါစက သူးသီးတောငျကို အလညျရောကျတော့ ဘကွီး ဦးစံရှမေောငျအိမျကို သှားရောကျမိတျဖှဲ့ တဈခုတျတရ စကား သှားပွော ဖွဈပါတယျ။ တဈခါက ရခိုငျလကျနကျကိုငျပါတီတဈခုရဲ့ ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျ တဈဦး၊ နောကျ တော့ လကျနကျ ခြ၊ ဒီ့နောကျတော့ အခါခါ လကျနကျခြ၊ ဒီ့ထကျ နောကျပိုငျးမှာ အခါခါ လကျနကျမခြ လညျး အခါခါ လကျနကျခခြဲ့တယျလို့ အမွငျခံရသူ ဖွဈခဲ့တယျ။
ကြှနျတျော ဘကွီးစံရှမေောငျနဲ့ တှလေို့ပွနျလာပွီး မြားမကွာအတှငျးမှာပဲ သူနဲ့ အငျတာဗြူး ကို အခွခေံပွီး သူ့ အကွောငျးကို ခရြေးဖွဈပါတယျ။ တခွားဖွညျ့စှကျ မှတျစုတှအေပါအဝငျ စာမကျြနှာ ခွောကျဆယျ မကရှိတဲ့ အတ်ထုပတ်တိတဈခုကို ရပါတယျ။ အဲသညျအတ်ထုပတ်တိကို ဘယျမှာမှ ပုံနှိပျဖျောမပွခငျ ဖဘှေ့တျမှာ အမွညျးအစမျး သဘော တငျပွဖူးတယျ။
ဦးစံရှမေောငျဟာ “ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီ(ရကပ)ရဲ့ ကြားသုံးကောငျ အနကျ တဈကောငျဖွဈတယျလို့ တငျစားခွငျးကို ခံရဖူးသူဖွဈတယျ။ ပါတီရဲ့ခဈြခွငျးမုနျးခွငျး နှဈမြိုးစလုံးကို ခံရဖူးသူဖွဈတယျ” ဆိုတာ ကိုတောငျမှ သူ့ကို ရနျသူ့ဘကျတျောသားအဖွဈမွငျကွတဲ့ အခြို့သော စာဖတျသူတှကေ ခါးခါးသီးသီး ကနျ့ကှကျကွတယျ။ တခြို့က ကြှနျတေျာ့ကို လူကိုယျတိုငျ စကားပွောကနျ့ကှကျကွတယျ။
သူတို့ကနျ့ကှကျကွတော့ ကြှနျတျောရေးလိုကျတဲ့ အခကျြနှဈခကျြကို စစေ့စေ့ပျစပျ ပွနျသုံးသပျ ကွညျ့မိတယျ၊ မှားမြားမှားနသေလား လို့ပေါ့လေ။ မမှားပါဘူး။ သူဟာ ရခိုငျပွညျ ကှနျမွူနဈပါတီရဲ့ ကြားသုံးကောငျအနကျ တဈကောငျဖွဈတယျလို့ တငျစားခွငျး ကို ခံရဖူးသူဖွဈတယျ လို့ကြှနျတျော ရေးခဲ့တယျ။ မှနျတယျ။ ရကပ ပါတီဝငျဟောငျးတဈယောကျက ကြှနျတေျာ့ကို အဲသလိုပဲ ပွောဖူးတယျ။ နောကျပွီးတော့ တကယျတမျးလညျး သူဟာ ပါတီဝငျအခြို့ရဲ့ ခဈြခွငျးကိုခံယူရဖူးသူဆိုတာ ကြှနျတျောစုံစမျးသလောကျ မှနျသငျ့သလောကျမှနျခဲ့တယျ၊ မှနျတဲ့အခြိနျမှာမှနျခဲ့တယျ၊ နောကျတဈခါ ပါတီဝငျအခြို့ရဲ့ မုနျးခွငျးကိုလညျး ခံယူရသူလညျးဖွဈဖူးတယျ ဆိုတာလညျး အငွငျးပှားဖှယျရာမရှိဘူး။ ဒီတော့ ကြှနျတျော ရေးလိုကျတဲ့ အထဲမှာ အမှားပါသှားတယျလို့ ကြှနျတျော မယူဆပါဘူး။ ပရိတျသတျရှကေို့ ဒီစာမူကို ပို့လိုကျရငျကောငျးမှာပဲလို့ လိုကျရှာတော့ နရော အရှေ့ အပွောငျးတှကွေောငျ့ ကြှနျတျောရေးခဲ့တဲ့စာမူ အခြောကို ပွနျရှာလို့ မရတော့ ပမေယျ့ ပွနျရှာလို့ရတဲ့ ပထမ(ဦးဆုံး) စာမူကွမျးကို အခွခေံပွီးသကာလ Coral Arakan က တဈဆငျ့ စာဖတျ ပရိတျသတျ မကျြမှောကျ ကို ကြှနျတျော တငျပွလိုကျပါ တယျ။ ဘကွီးစံရှမေောငျဟာ အိုပါပွီ။ သမေငျးရဲ့ ချေါသံကို ခပျဝါးဝါးလေး ကွားနရေပွီ။ ဒီတော့ သူမှားခဲ့တဲ့ ကဏ်ဍ တှရှေိခဲ့တယျ ဆိုတာကို တဈဖကျက အသိအမှတျပွုရငျး သူစှမျးဆောငျခဲ့တာတှအေတှကျ ဒီအခနျးဆကျဆောငျးပါးတှအေားဖွငျ့ သူ့ကို အလေးပွုပါတယျ။
ဦးစံရှမေောငျရဲ့အိမျက ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ဆကျသှယျရေးရုံးရဲ့နောကျဘကျမှာ ရှိတယျ။ သူ့အိမျကို ရုံးနဲ့ ခြောငျးလကျတကျကလေးတဈခုကွားမှာရှိတဲ့က်ကိုပငျကွီးရဲ့ အမွဈတကျတှေ အမွဈဆုံတှကွေား ကနေ လြှောကျသှား ရပါတယျ။ လမျးသှယျထဲက အမွဈတကျတှကေို နငျးပွီး လြှောကျဝငျလာလို့ လှမျးကွညျ့လိုကျရငျ သဈသားတိုငျထူ ၀ါးထရံကာ သပျသပျရပျရပျတဈထပျအိမျကလေးရဲ့ဝရနျတာကို လှမျးမွငျရ တယျ။ ကြှနျတျောရောကျ လာတိုငျး အဲသညျဝရနျတာမှာ ဦးစံရှမေောငျအမွဲလိုလို ထိုငျနလေရှေိ့တယျ။ ဝရနျတာကို ကြှနျတျောတို့ တကျလာတာနဲ့ သူ့အနားမှာ ရှိတဲ့ သဈသားကုလားထိုငျ တဈလုံးနဲ့ ပလကျစတဈထိုငျခုံတဈလုံးကို ညှနျပွပွီး ”မောငျတို့ထိုငျကွ ထိုငျကွ ” လို့ပွောလရှေိ့တယျ။ ကြှနျတျောနဲ့ ကြှနျတေျာ့သူ့ငယျခငျြး ကိုဥက်ကာတို့အားရငျ အားသလို ဘကွီး ဦးစံရှမေောငျဆီ လာလာပွီး သူရဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို နားထောငျမှတျတမျးတငျကွ တယျ။
ကြှနျတျောက တဈကိုယျတျော သတငျးသမား၊ စာရေးဆရာ။ ဘကွီးဦးစံရှမေောငျက အငျတာဗြူးခံ အလငျးဝငျ ပွောကျကြား ခေါငျးဆောငျဟောငျး။ ကိုဥက်ကာက ကြှနျတျောတို့နှဈဦး နှဈဘကျကွားက မိတျဆှေ။ ဘကွီးရဲ့ဇနီးက ကြှနျတျောတို့ရောကျလာတာနဲ့ ရနှေေးကွမျးတို့ လကျဖကျသုတျတို့နဲ့ ပွငျဆငျ ဧညျ့ခံလရှေိ့တယျ။တဈခါတဈခါဘကွီးရဲ့သားဖွဈဖွဈ၊ သမီးဖွဈဖွဈ အလုပျကနေ ခဏတဖွုတျရောကျ လာရငျ ကြှနျတျောတို့ဘေးကနေ ဝရနျတာကို ဖွတျပွီး အိမျထဲခနျးကို ဝငျရတာမို့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ပဋိသန်ခာရ စကားလေးတဈခှနျးနှဈခှနျးလောကျပွောဆိုပွီးမှ အိမျထဲဝငျသှားကွလရှေိ့ တယျ။ တဈခါတဈခတျေက နာမညျမရှိတရှိ ပွောကျကြားခေါငျးဆောငျဟောငျးကို ဂါရဝလာပွုရုံ သကျသကျပဲလို့ နဂိုကမှနျးထားခဲ့မိတဲ့ ကြှနျတျောဟာ ဘကွီးစံရှမေောငျနဲ့ စကားဝိုငျးဖှဲ့ မိတော့မှ ဘကွီးရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့အမွငျကို စာဖှဲ့မယျဆိုရငျ တဈခြိနျက ရခိုငျတို့ရဲ့ ခတျေပွိုငျ သမိုငျးကို မှတျတမျးတငျရာလညျးရောကျမယျလို့သဘောပေါကျလာ မိတော့ တယျ။
ဘကွီးဟာ အရှုံးနဲ့ အငွိမျးစားယူထားရတဲ့ ပွောကျကြားတပျမှူး တဈဦးပါ။ ရခိုငျ အမြိုးသား တို့ရဲ့ တပျမတျော တဈခုပျေါထှနျးလားဖို့အတှကျ ဟိုအခါက ကိုယျတို့ သိသမြှ တတျသမြှ ဉာဏျစှမျးရှိသမြှနဲ့ ကွိုးစားခဲ့ကွဖူးတယျ။ ကိုယျ့တပျထဲက ခေါငျးဆောငျ အခငျြးခငျြး မယုံသင်ျကာစိတျတှကွေီးလာပွီး သူမသတျရငျ ကိုယျသတျရမယျ့ အခွအေနေ အထိ ရောကျလာတဲ့အခါ သူ့ကို သတျမယျ့အစား ကိုယျကရှောငျထှကျလာပွီး ရနျသူ့ဆီမှာ လကျနကျခြ၊ သာမနျ အရပျသားဘဝနဲ့ နဖေို့ ရှေးခယျြခဲ့ ရတယျ။
ကိုယျ့နာမညျက စံရှမေောငျ ရခိုငျပွညျကှနျမွူနဈပါတီမှာ ဗဟိုကျောမတီဝငျအဖွဈရယျ၊ ၀ါဒဖွနျ့ခြိရေး နဲ့ နိုငျငံခွားဆကျသှယျရေးတာဝနျခံအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့တယျ။
၁၉၄၂-ခုနှဈ ဒုတျိယကမ်ဘာစဈကာလအတှငျး ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေက ရခိုငျ လူမြိုးတှကေို ကုလားတှကေ အပွုတျရှငျးတော့ ဘကွီး အရမျးငယျငယျလေးပဲ ရှိသေး တယျ။ အဲသညျ ကုလား-ရခိုငျအဓိကရုဏျးဟာ မွပေုံမွို့ကနစေဖွဈလာတာ။ မွပေုံကနေ ဘူးသီးတောငျကို ကူးစကျ ရောကျရျှိ လာတယျ။ ဖုံညိုလိပျကြေးရှာက ရခိုငျတှကေို ကုလားတှဝေငျစီးပွီး အပွတျရှငျးရာကနေ ဘူးသီးတောငျ ကုလားရခိုငျ အဓိကရုဏျးစတယျ။ ရခိုငျတှအေကုနျလိုလို အသတျခံရပွီး မဆိုစလောကျ အရအေတှကျသာ ထှကျပွေးလှတျမွောကျ လာခဲ့တယျ။ အရေးပိုငျ ဦးကြျောခိုငျ ကုလားလုပျကွံခံရလို့သသှေားပွီးနောကျပိုငျး ဘူးသီးတောငျမှာရှိတဲ့ ကရငျတပျစု၊ ဗားမားဗျောလံတီယာတပျသားတှနေဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှဟော ဘူးသီးတောငျ မွို့ပျေါကလူငယျတှနေဲ့ စုပေါငျးစညျးရုံးပွီးတော့ မွို့စောငျ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ ဖှဲ့ပွီး သကာလ လေးဘကျလေးတနျက တိုကျခိုကျလာတဲ့ ကုလားတှကေို နရေ့ောညပါ အစှမျးကုနျ ခုခံကာကှယျခဲ့ကွတယျ။ ကုလားတှဘေကျက မတရားအငျအားမြားလှတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရခိုငျတှခေံတိုကျလို့ ကုလားတှဘေကျက ဆုတျဆုတျသှားရတာ တပျမခြောငျးအထိ ဆုတျရတယျ။ ပကျြစီးသှား တဲ့ မိမိတို့ရပျရှာတှကေနထှေကျပွေး လှတျမွောကျလာတဲ့ ရခိုငျလူမြိုးတှေ ဘူးသီးတောငျ ဘောလုံးကှငျးမှာ စုပွီးနကွေရတယျ။
အဲသညျ ရခိုငျအသိုကျအဝနျးကို ရခိုငျ ဘုနျးတျောကွီး တဈပါးက ဦးဆောငျပွီး ကုလားရနျကို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျဖို့ ကွိုးစားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲသညျ ဘုနျးကွီးလညျး မကွာခငျမှာပဲ စှနျ့ခှာသှားပွနျ တယျ။ ခေါငျးဆောငျ ဘုနျးကွီးမရှိ လညျး ကနျြတဲ့လူတှကေ ဆကျနမွေဲ နရေတာပေါ့။ ရခိုငျပွညျတောငျပိုငျးကနတေကျလာတဲ့ ဗိုလျရနျအောငျဘီအိုငျအတေပျဟာ ဘူးသီးတောငျ ကို ရောကျလာတယျ။ ”လကျနကျဆိုလို့ ဓါးတိုတဈခြောငျးတောငျ ကိုငျဆောငျ သိမျးဆညျး ထားခွငျးမရှိစရေ” လို့ကွငွောတယျ။ ပွီးတော့မွို့ကို ကုလားရနျကနေ ကာကှယျ နကွေတဲ့ ယခငျရဲတပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးတှနေဲ့ အရပျသားတှဆေီက လကျနကျတှေ အကုနျ သိမျးယူတယျ။ သညျတော့ ရခိုငျတှလေကျထဲမှာ ဘယျလကျနကျမှ မကနျြဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကုလားတှလေကျထဲမှာ ဗွိတိသြှတှကေ ဂပြနျကို ခံတိုကျဖို့ပေးထားခဲ့တဲ့ လကျနကျတှေ ရှိနတေယျ။ ဗွိတိသြှတှရေဲ့ အောငျမွငျစှာ ဆုတျခှာနိုငျရေးဗြူဟာရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈရပျ ပေါ့။
အလယျသံကြျော(ရခိုငျ)ရှာကွီး ကုလားဖကျြပကျြသုဉျးသှားပွီး သုဿနျတစပွငျလို ခှေး တစီစီနဲ့ ကနျြရဈခဲ့တယျ။မောငျတောမွို့ပျေါက ရှငျပွေးပွေးနိုငျတဲ့ ရခိုငျတှကေတော့ မောငျတော တဈဘကျ ကမျးက (ယနေ့ ဘင်ျဂလာဒရှေျ့ အပိုငျ)ကယုခြောငျးကို ထှကျပွေး သှားရတယျ။ မောငျတောမွို့ကို ကုလားတှကေ ကိုယျပိုငျအစိုးရဖှဲ့ပွီး အုပျခြုပျကွတယျ။သူတို့ရဲ့ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ကို ”ငွိမျးခမျြးရေးကျောမတီ”လို့ ချေါတယျ။
ဘီအိုငျအတေပျက ဗိုလျရနျနောငျနဲ့ ဗိုလျမြိုးညှနျ့တို့ ဦးဆောငျတဲ့တပျစုတဈစု ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးဖို့ မောငျတောကို ကားတှနေဲ့ ခြီတကျသှားကွတယျ။ (မီးကြောငျးတှကေို ငွိမျးခမျြးရေးတရား ဟောမယျဆိုပါတော့)။ မောငျတောမှာ (မကွံကောငျး မစညျကောငျး) ကုလားတှနေဲ့ လူထု အစညျးအဝေး ကငျြးပတယျ။ နောကျပွီးတော့ မအပျမရာ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံး ညီညှတျရေးတရားကို ကုလားတှကေိုဟောတယျ။ တရားပှဲပွီးတော့ ကုလားတှကေ ထမငျးပှဲနဲ့ ဧညျ့ခံတယျ။ ထမငျးစားနတေုနျး ကုလားတှကေ ဘီအိုငျအေ ဧညျ့သညျတှကေို ဓါးနဲ့ဝငျခုတျကွတယျ။ အစကတညျးက အခွအေနကေိုသုံးသပျမိနတေဲ့ ယာဉျမောငျး တဈယောကျသာလြှငျပဲ အခြိနျမီထှကျပွေးလှတျမွောကျလာခဲ့တယျ။ ကနျြတဲ့လူတှေ အကုနျ သေ တယျ။ ဒီကိစ်စကို စုံစမျးဖို့ ဗိုလျရနျအောငျဟာ တပျခှဲ(၂)ခုနဲ့ ဘူးသီးတောငျကို တကျလာတယျ။
သူရောကျပွီး နောကျပိုငျးမှာ ကုလားတှေ လာလာတိုကျလို့ ဗိုလျရနျအောငျ ကိုယျတိုငျခုခံ ရတယျ။ အဲသလို အခွအေနတှေအေရမျးရှုပျထှေးနခြေိနျမှာ ဘာကွောငျ့ရယျမှနျးမသိ ဗိုလျရနျအောငျ တပျဆုတျဖို့ စီစဉျတော့တယျ။ ဘယျသူကအမိနျ့ပေးမှနျး မသိရဘဲ အထကျက အမိနျ့ပေးလို့ တပျဆုတျရတာဆိုပွီး ဘာမပွော ညာမပွောနဲ့ ဘူးသီးတောငျကနေ ဗိုလျရနျအောငျ တပျဆုတျတော့ တယျ။
တဈအခကျြဖွဈနိုငျတာက အဲသညျအခြိနျမှာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက ရနျကုနျမှာ အစိုးရအဖှဲ့ ဖှဲ့ဖို့လုပျနတေယျ။ ဒီလိုအရေးကွီးတဲ့အခြိနျမှာ ဗိုလျရနျအောငျအနနေဲ့ နယျစှနျကိုရောကျနလေို့ ရာထူးလကျလှတျ သှားတာမြိုး ဖွဈမသှားစခေငျြဘူး။ တပျကို စှနျ့ခှာတဲ့တပျမှူးလညျးမဖွဈခငျြဘူး။ ဒါကွောငျ့ မို့လို့ တပျနဲ့တကှ ထှကျတျောမူနနျးက ခှာတာလို့ ဆိုကွ တယျ။
(အဲသညျ တပျဆုတျတဲ့ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ ကှယျလှနျသူရခိုငျ့နိုငျငံရေးသမားဟောငျး ဘုံဘောကျ သာကြျောကို ဘကွီး အငျတာဗြူးဖူးတယျ။ မေးခှနျးသုံးခုမေးဖူးတယျ။ ဘုံဘောကျသာကြျောဟာ ဟိုစဉျက ရခိုငျကြောငျးသား သမဂ်ဂဥက်ကဋ်ဌဖွဈပွီး ဗိုလျရနျအောငျရဲ့ ဘီအိုငျအတေပျကို ရခိုငျတောငျပိုငျး ကနေ မွောကျပိုငျးရောကျအောငျ လမျးပွ ဦးဆောငျ ချေါလာခဲ့သူဖွဈတယျ။ ဘီအိုငျအေ ရဲ့(ရခိုငျ)စဈဌာနခြုပျရုံးမှာ ဘုံဘောကျသာကြျောက ပွနျကွားရေး တာဝနျခံ အဖွဈ ဆောငျရှကျခဲ့ တယျ။ မေးခှနျးတဈ။ ဘူးသီးတောငျ ငှတေိုကျကနေ ငှသေား သိနျး(၂၀)ရခဲ့တယျ လို့ဆို တယျ။ အဲဒီငှသေား သိနျး(၂၀)ဟာ ငှစေက်ကူလား၊ ဒင်ျဂါးလား။ ငှဒေင်ျဂါးဖွဈတယျလို့ ဘုံဘောကျသာကြျောက ဖွတေယျ။ ငှအေကွှေ အသေးလေးတှေ ကိုတော့ ဆငျးရဲသား လူထုကို လကျတဈဆုပျစီခှဲဝပေေးလိုကျတယျ။ နောကျပွီးတော့ အဲသညျ သိနျး(၂၀)ကို ဘယျလို ခှဲဝယေူကွသလဲ။ မေးခှနျးနှဈ။ ဘူးသီးတောငျက သိမျးယူသှားတဲ့ လကျနကျ(၂၀၀)ကြျောကို ဘယျသူ ယူသှား သလဲ။ မေးခှနျးသုံး။ ဘီအိုငျအတေပျတှေ ဆုတျတာ ဘယျသူ့အမိနျ့နဲ့ တပျဆုတျတာလဲ။ ဘုံဘောကျသာကြျောက မေးခှနျးသုံးကနေ စဖွတေယျ။ တပျဆုတျတာ ငါတောငျ မသိလိုကျ ဘူးတဲ့။ ငါတောငျ သူငယျခငျြးအိမျကို ရောကျနတောဆိုတော့ ကနျြခဲ့တော့ မလို့………။ တပျသားတဈယောကျက လိုကျချေါလို့ မီလိုကျတာ။ ဒါတောငျ အဝတျတဈထညျ ကိုယျ တဈခုနဲ့ ဘာမှ မယူနိုငျပဲ သင်ျဘောဆိပျကို ပွေးဆငျးလာခဲ့ရတာ……..တဲ့။ ငှသေား သိနျး(၂၀)ကိုတော့ ဗိုလျရနျအောငျက ယူသှားတယျတဲ့။ (အိန်ဒိယကို သှားတဲ့ သခငျ သိနျးဖေ (စာရေးဆရာသိနျးဖမွေငျ့)ကို အဲသညျငှတှေထေဲက တခြို့တဝကျကို ခရီးစရိတျ အဖွဈ ခှဲဝပေေးလိုကျတယျ။ ကနျြငှတှေကေို နောကျပိုငျးမှာ ဂပြနျစဈဗိုလျတှဆေီကို အပျလိုကျတယျ လို့ တခွား မှတျတမျးတှအေရ သိရတယျ။)
လကျနကျနှဈရာကိုတော့ ငါကတောငျးလှနျးအားကွီးလို့ မငျးပွားအရောကျမှာ ငါ့ကို အလကျ လေးဆယျ ခှဲဝပေေး တယျတဲ့………ဘုံဘောကျသာကြျောက ပွောတယျ။ သူ့အထငျကို ပွောတာကတော့ အဲသညျတုနျးက ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက ရနျကုနျမှာ အစိုးရ အဖှဲ့ဖှဲ့ဖို့လုပျနတောဆိုတော့ ဝနျကွီးနရောမရလိုကျမှာစိုးလို့ ဗိုလျရနျအောငျ တပျဆုတျ ပွနျတာလို့ သူထငျတယျတဲ့။ တခြို့ပွောတာက ဗိုလျရနျအောငျဟာ မူဆလငျဘာသာဝငျဖွဈတယျ။ သခြောတယျ ………..မူဆလငျ။ ဒီတော့ ဆူလတနျမာမှတျတို့ရဲ့ အခါပေးမှုအရ မာရကနျတငျဘိ ကုလားသူဌေးဟာ သူ့သမီး မအေးညှနျ့နဲ့ ဗိုလျရနျအောငျကို ဖြားယောငျးတယျလို့ ဆိုတယျ။ မအေးညှနျ့က တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ မငျးကွီးကွိုကျ။ ဒီတော့ ဗိုလျရနျအောငျဟာ ကုလားဓါတျကသြှားပွီးသကာလ ခကျြခငျြးတပျဆုတျ သှားတာလို့ဆိုတယျ။ ဒါက ဘုံဘောကျ သာကြျော ပွောတဲ့ အတိုငျး ဘကွီးက ပွနျပွောပွတာ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၂-ခုနှဈ ဇှနျလ(၂၆)ရကျနမှေ့ာ ဘီအိုငျအတေပျ ဘူးသီးတောငျက ဆုတျခှာ တယျ။ တပျဆုတျမယျ ဆိုတာကို သိရတာနဲ့ ခကျြခငျြး မွို့ပျေါကလူကွီးတှကေ မွို့ကာကှယျရေးအတှကျ လကျနကျပေးဖို့ ၊ဒါမှမဟုတျ၊ မွို့သူမွို့သားတှကေို လုံခွုံ ဘေးကငျးရာ သကေံခှဆုံရှာ ကို ပွောငျးရှပေ့ေးဖို့ တငျပွကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါတှေ ဘာမှ ဖွဈမလာပါဘူး။ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားတှေ ဆီက ဓါးတိုတဈခြောငျးတောငျမကနျြစရေဆိုပွီး လကျနကျသိမျးခဲ့တဲ့ ဗိုလျရနျအောငျက ဘာတာဝနျမှ မယူဘဲ မပွောမဆို တပျဆုတျတော့ တာပါပဲ။
အဲသညျနမေ့နကျက ဘကွီးတို့မိသားစုလညျး ဘူးသီးတောငျသင်ျဘောဆိပျကို လာကွညျ့ သေးတယျ။ ဆိပျခံမှာရှိနတေဲ့ သင်ျဘောနှဈစီးအနကျ အငျဂငျြရှိနတေဲ့ Progress သင်ျဘော ပျေါကို ဘီအိုငျအတေပျသားတှေ တကျကွတယျ။ အရပျသားတှလေညျး လုတကျမယျ လုပျတော့ သနေတျနဲ့ ပဈတယျ။ သတောတော့ မရှိဘူး။ ဒဏျရာလေး ဘာလေး ရတာပဲ ရှိတယျ။ Progress က ဆှဲသှားမယျဆိုပွီး ကွိုးခညျြတှဲထားတဲ့ ” မီးဝ ” သင်ျဘောပျေါကို အရပျသားတှေ အလုအယကျတကျကွပွနျတယျ။ သင်ျဘောက နှဈထပျသင်ျဘောဆိုတော့ သင်ျဘောဝမျးခေါငျးထဲဆငျးသှားတဲ့လူတှေ၊ သင်ျဘောခေါငျးမိုးပျေါ တကျသှားတဲ့ လူတှနေဲ့ ဆိုရငျ သင်ျဘောပျေါမှာ လူလှာလေးလှာအပွညျ့အသိပျဖွဈနတေယျ။
ကံဆိုးခငျြတော့ ”မီးဝ” သင်ျဘောဝမျးခေါငျးမှာ အပေါကျတှဖွေဈနလေို့ ရယေိုတော့ မွုပျတယျ ဆိုတာနဲ့ ရှကေ့ Progress သင်ျဘောကလညျး ကွိုးတှေ ဖွုတျခလြိုကျတော့တာပါပဲ။ ”မီးဝ” သင်ျဘော ပျေါကနေ ရထေဲခုနျခနြိုငျတဲ့သူတှကေ ခုနျခကြွတယျ။အဖွဈက ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့ ………ပေါကျပေါကျတှေ အပွညျ့ဖွညျ့ထားတဲ့ နို့ဆီဗူးခှံ တဈခှံရထေဲကို ရယေိုအိကြ နဈမွုပျ သှားတော့ ပေါကျပေါကျတှေ အကုနျရထေဲကို ကွဲပွနျ့မြောပါသှားသလိုပဲ။ မွဈပွငျထဲမှာ လူတှေ အကုနျကွဲပွနျ့မြောပါသှားတယျ။ အနညျးဆုံးလူလေးရာလောကျ သတေယျ။ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ ဆရာတျောဦးပညာသီဟအပါအဝငျ လူငါးဆယျလောကျကိုပဲ ကယျဆယျနိုငျခဲ့တယျ။ ဘကွီးတို့မိသားစု ကတော့ ဦးလေးတဈယောကျပိုငျ စကျလှေ ကလေးတဈစီးနဲ့ လိုကျခှငျ့ရလို့ ရသတေ့ောငျမွို့ ကို ရောကျရှိလှတျမွောကျခဲ့ကွတယျ။
ကုလားတှကေ တပျမခြောငျးမှာ အခိုငျအခံ့နရောကနေ …….. ဂပြနျတှပေါ တကျလာရငျ ငါတို့တော့ခံနိုငျတော့မှာ မဟုတျဘူးဆိုပွီး ဆုတျမလို့ ပွငျနကွေတာ။ ဘီအိုငျအေ တပျဆုတျသှားတဲ့နမှေ့ာ တပျဆုတျသှားတာကို သတငျးရတော့ ပထမဦးဆုံး ညပိုငျးမှာ လာပွီး ကငျးထောကျစနညျးနာတယျ။ တပျဆုတျသှားတာ သခြောတော့ ညဆယျနာရီမှာ လာတိုကျတော့တာပါပဲ။ အဲဒီကတညျးက ဘူးသီးတောငျနဲ့ မောငျတောနယျဟာ ကုလားလကျထဲကို လုံးလုံးကသြှားပွီးတော့ ဒသေခံရခိုငျတှဟော ပိုငျဆိုငျသမြှကို စှနျ့လှတျ ထားခဲ့ပွီး အသကျလုကာ ကုနျးကွောငျးထှကျပွေးကွရတော့ တာပါပဲ။ လမျးမှာ အသတျခံ ရတာတှကေ အမြားကွီး၊ ကုလားမယားအပွုခံရတဲ့ ရခိုငျအမြိုးသမီးတှလေညျး အမြားကွီး။ စဈကာလအတှငျး ဘူးသီးတောငျနဲ့ မောငျတောဒသေမှာ ရခိုငျတဈယောကျတဈပိုငျးမှ မကနျြခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
ဘကွီးကို ၁၉၃၇-ခုနှဈ ဇူလိုငျလ(၂၁)ရကျနေ့ ဘူးသီးတောငျမွို့မှာ မှေးတယျ။ ကိုယျ့ အဖကေ ဟိုစဉျက ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ဖဆပလ အမတျ၊ ဒသေခံအာဏာရ ဖဆပလ ခေါငျးဆောငျ ဦးစံထှနျးအောငျ ဖွဈပါတယျ။
စဈတှေ စိနျ့အနျးကှနျဗနျး(Saint Ann Convent)ကြောငျး (ယခု စဈတှေ အထက-၄)မှာ လေးတနျးအောငျတဲ့အထိ နခေဲ့တယျ။ အဲဒီတုနျးက ဘုနျးတျောကွီး (Father) တဈယောကျက ကိုယျ့ကိုခဈြတော့ ကိုယျ့အဖကေို လာပွောတယျ။ မငျးသားကို ငါအင်ျဂလနျချေါသှားပွီး စာတှဘောတှသေငျပေးခငျြလို့ဆိုတော့ အဖကေ ဟေ့ . . . ဟေ့ . . . ငါ့သားကို ပေးမလှတျနိုငျဘူး လို့ငွငျးတယျ။ ဒါနဲ့ အဖကေ ဒီပုံ အတိုငျးဆိုရငျ ငါ့သားကို အဲဒီကြောငျးမှာ ဆကျထားလို့ ကတော့ ခရဈယာနျ ဖွဈသှားတော့မှာပဲဆိုပွီး အဖကေ ကိုယျ့ကို ကြောငျးနုတျတယျ။ ပွီးတော့ အထက(၁)ကို ပို့တယျ။
အဲသညျ အထက(၁)မှာလညျး ကြောငျးသားတှကေ ခဏခဏ သပိတျမှောကျ ကွလှနျးတာနဲ့ အဖစေိတျညဈရပွနျတယျ။ ကျိုယျလညျး အဲသညျ သပိတျတှမှော ရောပါနတောကိုး။ အဲသညျ အခြိနျတုနျးက ရနျကုနျကိုပို့ပွီး စာသငျတဲ့စရိတျနဲ့ ဒါဂြီလငျကို ပို့ပွီး စာသငျတဲ့စရိတျက မကှာလတေော့ အဖကေ ၁၉၅၁-ခုနှဈမှာ ကိုယျ့ကို ဒါဂြီလငျပို့ပွီး ကြောငျးအိပျကြောငျးစား ပညာသငျစတေယျ။
ကိုယျက အဲသညျတုနျးက ခပျပပေဆေိုတော့ ဟိုကျစကူးဖိုငျနယျမပွီးခငျမှာပဲ ဒါဂြီလငျကြောငျးကနေ ကိုယျ့ကို ပွနျပို့ တာ ခံရတယျ။ အိမျကို မကျြနှာမပွရဲတဲ့ ကိုယျဟာ စဈတှတေို့ ဘူးသီးတောငျတို့ကို ပွနျမယျ့အစား ရနျကုနျ အထိ လယောဉျ လကျမှတျယူလိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲသညျလယောဉျက ကာကကတ်တား-စဈတှေ-ရနျကုနျကို အစဉျအတိုငျးပွေးဆှဲတာ။ အဖကေ ဘယျလို ဘယျပုံစုံစမျးပွီး သိသှား သလဲတော့ မသိဘူး။ စဈတှလေယောဉျကှငျးမှာ ကိုယျ့ကို လာစောငျ့နတေယျ။ လယောဉျ အဆငျးလှကေားရှေ့ တညျ့တညျ့မှာရပျပွီး ဆငျးလာတဲ့ ခရီးသညျတှထေဲမှာ သူ့သား ပါလေ မလားလို့ ကွညျ့ကွညျ့နတော။ ကိုယျကလညျး ကိုယျ့အဖမေမွငျအောငျ လယောဉျပျေါ ကနေ ကှယျကွညျ့နတေယျ။ ဆငျးတဲ့ လူကုနျသှားပမေယျ့လို့ သူ့သားပါမလာတော့ အဖိုးကွီးက ဒှိဟစိတျနဲ့ လယောဉျပွုတငျးပေါကျတှကေို လှမျးကွညျ့တော့ ကိုယျက ငုံ့ပွီး ပုနျးနရေတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျ့အဖသော ဟေ့ ဟေ့ ခဏနဦေး ဆိုပွီး လယောဉျ ပျေါတကျကွညျ့ရငျ (ဒါမှမဟုတျ) သူက အာဏာလကျရှိ ဖဆပလ အမ တျဖွဈနလေတေော့ လယောဉျစီး ခရီးသညျစာရငျး ကိုသာ တောငျးကွညျ့မယျဆိုရငျ ကိုယျပါလာ တာကို တှသှေ့ားမှာ မုခပြဲ။
ဒီလိုနဲ့ စဈတှကေို ပွနျရောကျရမယျ့အစား ရနျကုနျက အဖညေီ့မ ကိုယျ့အဒျေါအိမျကို ကိုယျရောကျ သှားတယျ။ အဲသညျလို ရနျကုနျရောကျသှားပွီး ရနျကုနျမှာ အထကျတနျး ကြောငျး တကျရာကနေ အလံနီ စညျးရုံးရေးမှူးတှနေဲ့ တှတေ့ော့တာပါပဲ။ ကိုယျ့ကို စညျးရုံးတဲ့သူက ရဲနီအောငျသိနျး။ ရဲနီအောငျသိနျး ကိုယျ့ကို စညျးရုံးတာ အငျမတနျမှ ညငျသာတယျ။ ကှနျမွူနဈ သဘော တရားတှရေဲ့ အခွခေံ အနုမာနတဈခုဖွဈတဲ့ အနုပဋိလောမကို ကိုယျ့ကိုနားသှငျးတာ အငျမတနျမှ ပညာသားပါလှတယျ။ အရအေတှကျကနေ အရညျအခငျြးသို့ ပွောငျးလဲပုံကို ရှငျးပွတာ ထမငျးအိုးတဈအိုးတညျပွီး တဖွညျးဖွညျးဆူလာပုံဥပမာကို သုံးတယျ။ အဲ……….ထမငျးစား ပွီးတော့ ခြီးပါတဲ့အထိ ဖွဈစဉျ အဆငျ့ဆငျ့ဟာ ဘယျလို ပွောငျးလဲ သှားသလဲ ဆိုတာကို ရှငျးပွတယျ။ တကယျတော့ ဒါတှဟော ကှနျမွူနဈတှေ ရဲ့ အနူ ပဋိလောမ ရုပျဝါဒကို နားသှငျးနတောမှနျး ကိုယျလုံးလုံးမရိပျမိဘူး။ နောကျမှ အနူပဋိလောမရုပျဝါဒနဲ့ ကိုယျ့ကို တတေ့ဆေို့ငျဆိုငျမိတျဆကျပေးတယျ။ ပွီးတော့ သခငျစိုး အကွောငျးကို ပွောပွတယျ။ အလံနီပါတီရဲ့ မူဝါဒတှကေို ရှငျးပွတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျဟာ ဖဆပါလ ထမီနီအမြိုးသမီး ကိုယျ့အဒျေါအိမျမှာနပွေီး အသကျ(၂၀)အရှယျမှာ အလံနီ ပါတီရဲ့ အရံပါတီဝ ငျဖွဈလာခဲ့တယျ။ ကိုယျ့အဒျေါကတော့ လုံးလုံးမရိပျမိဘူး။
တဈခါတဈလေ တဈညလုံးလုံး ကွငွောစာရှတျတှေ လိုကျကပျကွရတာရှိတယျ။ ကိုယျ့ အိမျရှေ့၊ ကိုယျအိမျ အနီးအနားနရောတှလေညျး ပါတာပေါ့။ မနကျကရြငျ မခုတျတတျတဲ့ ကွောငျလိုလို ကိုယျ့အဒျေါအိမျပျေါကို ကိုယျပွနျ ရောကျနပွေီ။ ကိုယျ့အဒျေါ မနကျပိုငျး အပွငျ ကပွနျလာလို့ စြေးကပွနျလာလို့ ဟေ့…….ဟိုနရောတှမှော အလံနီ ကွငွောစာရှကျ တှေ ကပျထားတယျ။ ဘယျသူလကျသရမျးသှားသလဲ မသိဘူးဆိုပွီး အဒျေါပွောတဲ့အခါ ကရြငျ ဟုတျလားအဒျေါ ဘာညာနဲ့ မှငျသသေေ ဖွီးဖွနျးရာကနေ လကျတှယေူ့ဂြီ သငျခနျးစာတှကေို စတငျ လကေ့ငျြ့သငျယူခဲ့တယျ လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
အပိုငျးနှဈကို ဆကျလကျ ဖတျရှုကွပါရနျ။
[💙💙💙💙💙 zawgyi version]
စံရွှေမောင် ၊သို့မဟုတ်၊ လက်နက်ချ ရကပ ကျားနာတစ်ကောင် (အပိုင်း တစ်)
စစ်တွေ၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ အခန်းဆက် အတ္ထုပတ္တိ ]
အခန်း (တစ်) ဘ၀မှာ အခါခါ လက်နက်ချရသူ
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က အက်ဆေးဟန် စာစုတစ်ခုကို မကြာခင်က ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ စာစုရဲ့ နာမည်က “လက်နက်ချ” တဲ့။
ဦးနေ၀င်းအစိုးရဆီမှာ လက်နက်ချခဲ့တဲ့ တောခို သူပုန်ဟောင်း တစ်ယောက် ဟာ တစ်ခါ လက်နက်ချရုံနဲ့ မပြီးပဲ တော်လှန်ရေးကောင်စီ တစ်ဖြစ်လဲ မဆလအစိုးရကို ဟိုမှာနည်းနည်း ဒီမှာနည်းနည်းဆိုသလို အစိုးရကို လိုက်ကူ ပေးနေခဲ့ရပုံ အဖြစ်မှန်ကို အကျဉ်းသဘောရေးထားတယ်။
သူပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက ဒီလိုပါ။ လူဆိုတာ တစ်ခါလက်နက်ချလိုက်ရင် ပထမဆုံး တစ်ခါထဲတင် လက်နက်ချရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘ၀မှာ အခါခါ လက်နက်ချ ရတတ်တယ်တဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော် ကျွန်တော် အာဖဂန်နစ္စတန်က ပြန်လာခါစက သူးသီးတောင်ကို အလည်ရောက်တော့ ဘကြီး ဦးစံရွှေမောင်အိမ်ကို သွားရောက်မိတ်ဖွဲ့ တစ်ခုတ်တရ စကား သွားပြော ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါက ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပါတီတစ်ခုရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦး၊ နောက် တော့ လက်နက် ချ၊ ဒီ့နောက်တော့ အခါခါ လက်နက်ချ၊ ဒီ့ထက် နောက်ပိုင်းမှာ အခါခါ လက်နက်မချ လည်း အခါခါ လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ အမြင်ခံရသူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဘကြီးစံရွှေမောင်နဲ့ တွေ့လို့ပြန်လာပြီး များမကြာအတွင်းမှာပဲ သူနဲ့ အင်တာဗျူး ကို အခြေခံပြီး သူ့ အကြောင်းကို ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဖြည့်စွက် မှတ်စုတွေအပါအ၀င် စာမျက်နှာ ခြောက်ဆယ် မကရှိတဲ့ အတ္ထုပတ္တိတစ်ခုကို ရပါတယ်။ အဲသည်အတ္ထုပတ္တိကို ဘယ်မှာမှ ပုံနှိပ်ဖော်မပြခင် ဖေ့ဘွတ်မှာ အမြည်းအစမ်း သဘော တင်ပြဖူးတယ်။ ဦးစံရွှေမောင်ဟာ “ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ရကပ)ရဲ့ ကျားသုံးကောင် အနက် တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ တင်စားခြင်းကို ခံရဖူးသူဖြစ်တယ်။ ပါတီရဲ့ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးကို ခံရဖူးသူဖြစ်တယ်” ဆိုတာ ကိုတောင်မှ သူ့ကို ရန်သူ့ဘက်တော်သားအဖြစ်မြင်ကြတဲ့ အချို့သော စာဖတ်သူတွေက ခါးခါးသီးသီး ကန့်ကွက်ကြတယ်။ တချို့က ကျွန်တော့်ကို လူကိုယ်တိုင် စကားပြောကန့်ကွက်ကြတယ်။ သူတို့ကန့်ကွက်ကြတော့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ပြန်သုံးသပ် ကြည့်မိတယ်၊ မှားများမှားနေသလား လို့ပေါ့လေ။ မမှားပါဘူး။ သူဟာ ရခိုင်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ကျားသုံးကောင်အနက် တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ တင်စားခြင်း ကို ခံရဖူးသူဖြစ်တယ် လို့ကျွန်တော် ရေးခဲ့တယ်။ မှန်တယ်။ ရကပ ပါတီဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အဲသလိုပဲ ပြောဖူးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တကယ်တမ်းလည်း သူဟာ ပါတီဝင်အချို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုခံယူရဖူးသူဆိုတာ ကျွန်တော်စုံစမ်းသလောက် မှန်သင့်သလောက်မှန်ခဲ့တယ်၊ မှန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ခဲ့တယ်၊ နောက်တစ်ခါ ပါတီဝင်အချို့ရဲ့ မုန်းခြင်းကိုလည်း ခံယူရသူလည်းဖြစ်ဖူးတယ် ဆိုတာလည်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တဲ့ အထဲမှာ အမှားပါသွားတယ်လို့ ကျွန်တော် မယူဆပါဘူး။ ပရိတ်သတ်ရှေ့ကို ဒီစာမူကို ပို့လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ လိုက်ရှာတော့ နေရာ အရွှေ့ အပြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာမူ အချောကို ပြန်ရှာလို့ မရတော့ ပေမယ့် ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ ပထမ(ဦးဆုံး) စာမူကြမ်းကို အခြေခံပြီးသကာလ Coral Arakan က တစ်ဆင့် စာဖတ် ပရိတ်သတ် မျက်မှောက် ကို ကျွန်တော် တင်ပြလိုက်ပါ တယ်။ ဘကြီးစံရွှေမောင်ဟာ အိုပါပြီ။ သေမင်းရဲ့ ခေါ်သံကို ခပ်ဝါးဝါးလေး ကြားနေရပြီ။ ဒီတော့ သူမှားခဲ့တဲ့ ကဏ္ဍ တွေရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို တစ်ဖက်က အသိအမှတ်ပြုရင်း သူစွမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေအတွက် ဒီအခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွေအားဖြင့် သူ့ကို အလေးပြုပါတယ်။
ဦးစံရွှေမောင်ရဲ့အိမ်က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေးရုံးရဲ့နောက်ဘက်မှာ ရှိတယ်။ သူ့အိမ်ကို ရုံးနဲ့ ချောင်းလက်တက်ကလေးတစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့က္ကိုပင်ကြီးရဲ့ အမြစ်တက်တွေ အမြစ်ဆုံတွေကြား ကနေ လျှောက်သွား ရပါတယ်။ လမ်းသွယ်ထဲက အမြစ်တက်တွေကို နင်းပြီး လျှောက်ဝင်လာလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် သစ်သားတိုင်ထူ ၀ါးထရံကာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်တစ်ထပ်အိမ်ကလေးရဲ့ဝရန်တာကို လှမ်းမြင်ရ တယ်။ ကျွန်တော်ရောက် လာတိုင်း အဲသည်ဝရန်တာမှာ ဦးစံရွှေမောင်အမြဲလိုလို ထိုင်နေလေ့ရှိတယ်။ ၀ရန်တာကို ကျွန်တော်တို့ တက်လာတာနဲ့ သူ့အနားမှာ ရှိတဲ့ သစ်သားကုလားထိုင် တစ်လုံးနဲ့ ပလက်စတစ်ထိုင်ခုံတစ်လုံးကို ညွှန်ပြပြီး ”မောင်တို့ထိုင်ကြ ထိုင်ကြ ” လို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူ့ငယ်ချင်း ကိုဥက္ကာတို့အားရင် အားသလို ဘကြီး ဦးစံရွှေမောင်ဆီ လာလာပြီး သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို နားထောင်မှတ်တမ်းတင်ကြ တယ်။
ကျွန်တော်က တစ်ကိုယ်တော် သတင်းသမား၊ စာရေးဆရာ။ ဘကြီးဦးစံရွှေမောင်က အင်တာဗျူးခံ အလင်းဝင် ပြောက်ကျား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း။ ကိုဥက္ကာက ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး နှစ်ဘက်ကြားက မိတ်ဆွေ။ ဘကြီးရဲ့ဇနီးက ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာနဲ့ ရေနွေးကြမ်းတို့ လက်ဖက်သုတ်တို့နဲ့ ပြင်ဆင် ဧည့်ခံလေ့ရှိတယ်။တစ်ခါတစ်ခါဘကြီးရဲ့သားဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ကနေ ခဏတဖြုတ်ရောက် လာရင် ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေ ၀ရန်တာကို ဖြတ်ပြီး အိမ်ထဲခန်းကို ၀င်ရတာမို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပဋိသန္ခာရ စကားလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပြောဆိုပြီးမှ အိမ်ထဲဝင်သွားကြလေ့ရှိ တယ်။ တစ်ခါတစ်ခေတ်က နာမည်မရှိတရှိ ပြောက်ကျားခေါင်းဆောင်ဟောင်းကို ဂါရ၀လာပြုရုံ သက်သက်ပဲလို့ နဂိုကမှန်းထားခဲ့မိတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဘကြီးစံရွှေမောင်နဲ့ စကားဝိုင်းဖွဲ့ မိတော့မှ ဘကြီးရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့အမြင်ကို စာဖွဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်က ရခိုင်တို့ရဲ့ ခေတ်ပြိုင် သမိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ရာလည်းရောက်မယ်လို့သဘောပေါက်လာ မိတော့ တယ်။
ဘကြီးဟာ အရှုံးနဲ့ အငြိမ်းစားယူထားရတဲ့ ပြောက်ကျားတပ်မှူး တစ်ဦးပါ။ ရခိုင် အမျိုးသား တို့ရဲ့ တပ်မတော် တစ်ခုပေါ်ထွန်းလားဖို့အတွက် ဟိုအခါက ကိုယ်တို့ သိသမျှ တတ်သမျှ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြဖူးတယ်။ ကိုယ့်တပ်ထဲက ခေါင်းဆောင် အချင်းချင်း မယုံသင်္ကာစိတ်တွေကြီးလာပြီး သူမသတ်ရင် ကိုယ်သတ်ရမယ့် အခြေအနေ အထိ ရောက်လာတဲ့အခါ သူ့ကို သတ်မယ့်အစား ကိုယ်ကရှောင်ထွက်လာပြီး ရန်သူ့ဆီမှာ လက်နက်ချ၊ သာမန် အရပ်သားဘ၀နဲ့ နေဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ ရတယ်။
ကိုယ့်နာမည်က စံရွှေမောင် ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာ ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်ရယ်၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး နဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တယ်။
၁၉၄၂-ခုနှစ် ဒုတ်ိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသက ရခိုင် လူမျိုးတွေကို ကုလားတွေက အပြုတ်ရှင်းတော့ ဘကြီး အရမ်းငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေး တယ်။ အဲသည် ကုလား-ရခိုင်အဓိကရုဏ်းဟာ မြေပုံမြို့ကနေစဖြစ်လာတာ။ မြေပုံကနေ ဘူးသီးတောင်ကို ကူးစက် ရောက်ရှိ် လာတယ်။ ဖုံညိုလိပ်ကျေးရွာက ရခိုင်တွေကို ကုလားတွေဝင်စီးပြီး အပြတ်ရှင်းရာကနေ ဘူးသီးတောင် ကုလားရခိုင် အဓိကရုဏ်းစတယ်။ ရခိုင်တွေအကုန်လိုလို အသတ်ခံရပြီး မဆိုစလောက် အရေအတွက်သာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် လာခဲ့တယ်။ အရေးပိုင် ဦးကျော်ခိုင် ကုလားလုပ်ကြံခံရလို့သေသွားပြီးနောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မှာရှိတဲ့ ကရင်တပ်စု၊ ဗားမားဗော်လံတီယာတပ်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဘူးသီးတောင် မြို့ပေါ်ကလူငယ်တွေနဲ့ စုပေါင်းစည်းရုံးပြီးတော့ မြို့စောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး သကာလ လေးဘက်လေးတန်က တိုက်ခိုက်လာတဲ့ ကုလားတွေကို နေ့ရောညပါ အစွမ်းကုန် ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကုလားတွေဘက်က မတရားအင်အားများလှတယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်တွေခံတိုက်လို့ ကုလားတွေဘက်က ဆုတ်ဆုတ်သွားရတာ တပ်မချောင်းအထိ ဆုတ်ရတယ်။ ပျက်စီးသွား တဲ့ မိမိတို့ရပ်ရွာတွေကနေထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘူးသီးတောင် ဘောလုံးကွင်းမှာ စုပြီးနေကြရတယ်။
အဲသည် ရခိုင်အသိုက်အ၀န်းကို ရခိုင် ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးက ဦးဆောင်ပြီး ကုလားရန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသည် ဘုန်းကြီးလည်း မကြာခင်မှာပဲ စွန့်ခွာသွားပြန် တယ်။ ခေါင်းဆောင် ဘုန်းကြီးမရှိ လည်း ကျန်တဲ့လူတွေက ဆက်နေမြဲ နေရတာပေါ့။ ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကနေတက်လာတဲ့ ဗိုလ်ရန်အောင်ဘီအိုင်အေတပ်ဟာ ဘူးသီးတောင် ကို ရောက်လာတယ်။ ”လက်နက်ဆိုလို့ ဓါးတိုတစ်ချောင်းတောင် ကိုင်ဆောင် သိမ်းဆည်း ထားခြင်းမရှိစေရ” လို့ကြေငြာတယ်။ ပြီးတော့မြို့ကို ကုလားရန်ကနေ ကာကွယ် နေကြတဲ့ ယခင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့ အရပ်သားတွေဆီက လက်နက်တွေ အကုန် သိမ်းယူတယ်။ သည်တော့ ရခိုင်တွေလက်ထဲမှာ ဘယ်လက်နက်မှ မကျန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကုလားတွေလက်ထဲမှာ ဗြိတိသျှတွေက ဂျပန်ကို ခံတိုက်ဖို့ပေးထားခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဗြိတိသျှတွေရဲ့ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာနိုင်ရေးဗျူဟာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ပေါ့။
အလယ်သံကျော်(ရခိုင်)ရွာကြီး ကုလားဖျက်ပျက်သုဉ်းသွားပြီး သုဿန်တစပြင်လို ခွေး တစီစီနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။မောင်တောမြို့ပေါ်က ရှင်ပြေးပြေးနိုင်တဲ့ ရခိုင်တွေကတော့ မောင်တော တစ်ဘက် ကမ်းက (ယနေ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် အပိုင်)ကယုချောင်းကို ထွက်ပြေး သွားရတယ်။ မောင်တောမြို့ကို ကုလားတွေက ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖွဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ”ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ”လို့ ခေါ်တယ်။
ဘီအိုင်အေတပ်က ဗိုလ်ရန်နောင်နဲ့ ဗိုလ်မျိုးညွန့်တို့ ဦးဆောင်တဲ့တပ်စုတစ်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ မောင်တောကို ကားတွေနဲ့ ချီတက်သွားကြတယ်။ (မီးကျောင်းတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးတရား ဟောမယ်ဆိုပါတော့)။ မောင်တောမှာ (မကြံကောင်း မစည်ကောင်း) ကုလားတွေနဲ့ လူထု အစည်းအဝေး ကျင်းပတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မအပ်မရာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးတရားကို ကုလားတွေကိုဟောတယ်။ တရားပွဲပြီးတော့ ကုလားတွေက ထမင်းပွဲနဲ့ ဧည့်ခံတယ်။ ထမင်းစားနေတုန်း ကုလားတွေက ဘီအိုင်အေ ဧည့်သည်တွေကို ဓါးနဲ့ဝင်ခုတ်ကြတယ်။ အစကတည်းက အခြေအနေကိုသုံးသပ်မိနေတဲ့ ယာဉ်မောင်း တစ်ယောက်သာလျှင်ပဲ အချိန်မီထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ အကုန် သေ တယ်။ ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းဖို့ ဗိုလ်ရန်အောင်ဟာ တပ်ခွဲ(၂)ခုနဲ့ ဘူးသီးတောင်ကို တက်လာတယ်။
သူရောက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကုလားတွေ လာလာတိုက်လို့ ဗိုလ်ရန်အောင် ကိုယ်တိုင်ခုခံ ရတယ်။ အဲသလို အခြေအနေတွေအရမ်းရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ ဗိုလ်ရန်အောင် တပ်ဆုတ်ဖို့ စီစဉ်တော့တယ်။ ဘယ်သူကအမိန့်ပေးမှန်း မသိရဘဲ အထက်က အမိန့်ပေးလို့ တပ်ဆုတ်ရတာဆိုပြီး ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ဘူးသီးတောင်ကနေ ဗိုလ်ရန်အောင် တပ်ဆုတ်တော့ တယ်။
တစ်အချက်ဖြစ်နိုင်တာက အဲသည်အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရန်ကုန်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့လုပ်နေတယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ရန်အောင်အနေနဲ့ နယ်စွန်ကိုရောက်နေလို့ ရာထူးလက်လွတ် သွားတာမျိုး ဖြစ်မသွားစေချင်ဘူး။ တပ်ကို စွန့်ခွာတဲ့တပ်မှူးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် မို့လို့ တပ်နဲ့တကွ ထွက်တော်မူနန်းက ခွာတာလို့ ဆိုကြ တယ်။
(အဲသည် တပ်ဆုတ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကွယ်လွန်သူရခိုင့်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်း ဘုံဘောက် သာကျော်ကို ဘကြီး အင်တာဗျူးဖူးတယ်။ မေးခွန်းသုံးခုမေးဖူးတယ်။ ဘုံဘောက်သာကျော်ဟာ ဟိုစဉ်က ရခိုင်ကျောင်းသား သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ရန်အောင်ရဲ့ ဘီအိုင်အေတပ်ကို ရခိုင်တောင်ပိုင်း ကနေ မြောက်ပိုင်းရောက်အောင် လမ်းပြ ဦးဆောင် ခေါ်လာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘီအိုင်အေ ရဲ့(ရခိုင်)စစ်ဌာနချုပ်ရုံးမှာ ဘုံဘောက်သာကျော်က ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ တယ်။ မေးခွန်းတစ်။ ဘူးသီးတောင် ငွေတိုက်ကနေ ငွေသား သိန်း(၂၀)ရခဲ့တယ် လို့ဆို တယ်။ အဲဒီငွေသား သိန်း(၂၀)ဟာ ငွေစက္ကူလား၊ ဒင်္ဂါးလား။ ငွေဒင်္ဂါးဖြစ်တယ်လို့ ဘုံဘောက်သာကျော်က ဖြေတယ်။ ငွေအကြွေ အသေးလေးတွေ ကိုတော့ ဆင်းရဲသား လူထုကို လက်တစ်ဆုပ်စီခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲသည် သိန်း(၂၀)ကို ဘယ်လို ခွဲဝေယူကြသလဲ။ မေးခွန်းနှစ်။ ဘူးသီးတောင်က သိမ်းယူသွားတဲ့ လက်နက်(၂၀၀)ကျော်ကို ဘယ်သူ ယူသွား သလဲ။ မေးခွန်းသုံး။ ဘီအိုင်အေတပ်တွေ ဆုတ်တာ ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ တပ်ဆုတ်တာလဲ။ ဘုံဘောက်သာကျော်က မေးခွန်းသုံးကနေ စဖြေတယ်။ တပ်ဆုတ်တာ ငါတောင် မသိလိုက် ဘူးတဲ့။ ငါတောင် သူငယ်ချင်းအိမ်ကို ရောက်နေတာဆိုတော့ ကျန်ခဲ့တော့ မလို့………။ တပ်သားတစ်ယောက်က လိုက်ခေါ်လို့ မီလိုက်တာ။ ဒါတောင် အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ် တစ်ခုနဲ့ ဘာမှ မယူနိုင်ပဲ သင်္ဘောဆိပ်ကို ပြေးဆင်းလာခဲ့ရတာ……..တဲ့။ ငွေသား သိန်း(၂၀)ကိုတော့ ဗိုလ်ရန်အောင်က ယူသွားတယ်တဲ့။ (အိန္ဒိယကို သွားတဲ့ သခင် သိန်းဖေ (စာရေးဆရာသိန်းဖေမြင့်)ကို အဲသည်ငွေတွေထဲက တချို့တ၀က်ကို ခရီးစရိတ် အဖြစ် ခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ ကျန်ငွေတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေဆီကို အပ်လိုက်တယ် လို့ တခြား မှတ်တမ်းတွေအရ သိရတယ်။)
လက်နက်နှစ်ရာကိုတော့ ငါကတောင်းလွန်းအားကြီးလို့ မင်းပြားအရောက်မှာ ငါ့ကို အလက် လေးဆယ် ခွဲဝေပေး တယ်တဲ့………ဘုံဘောက်သာကျော်က ပြောတယ်။ သူ့အထင်ကို ပြောတာကတော့ အဲသည်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရန်ကုန်မှာ အစိုးရ အဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့လုပ်နေတာဆိုတော့ ၀န်ကြီးနေရာမရလိုက်မှာစိုးလို့ ဗိုလ်ရန်အောင် တပ်ဆုတ် ပြန်တာလို့ သူထင်တယ်တဲ့။ တချို့ပြောတာက ဗိုလ်ရန်အောင်ဟာ မူဆလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်။ သေချာတယ် ………..မူဆလင်။ ဒီတော့ ဆူလတန်မာမွတ်တို့ရဲ့ အခါပေးမှုအရ မာရကန်တင်ဘိ ကုလားသူဌေးဟာ သူ့သမီး မအေးညွှန့်နဲ့ ဗိုလ်ရန်အောင်ကို ဖျားယောင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မအေးညွှန့်က တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် မင်းကြီးကြိုက်။ ဒီတော့ ဗိုလ်ရန်အောင်ဟာ ကုလားဓါတ်ကျသွားပြီးသကာလ ချက်ချင်းတပ်ဆုတ် သွားတာလို့ဆိုတယ်။ ဒါက ဘုံဘောက် သာကျော် ပြောတဲ့ အတိုင်း ဘကြီးက ပြန်ပြောပြတာ။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၄၂-ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၆)ရက်နေ့မှာ ဘီအိုင်အေတပ် ဘူးသီးတောင်က ဆုတ်ခွာ တယ်။ တပ်ဆုတ်မယ် ဆိုတာကို သိရတာနဲ့ ချက်ချင်း မြို့ပေါ်ကလူကြီးတွေက မြို့ကာကွယ်ရေးအတွက် လက်နက်ပေးဖို့ ၊ဒါမှမဟုတ်၊ မြို့သူမြို့သားတွေကို လုံခြုံ ဘေးကင်းရာ သေကံခွဆုံရွာ ကို ပြောင်းရွေ့ပေးဖို့ တင်ပြကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေ ဘာမှ ဖြစ်မလာပါဘူး။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဆီက ဓါးတိုတစ်ချောင်းတောင်မကျန်စေရဆိုပြီး လက်နက်သိမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ရန်အောင်က ဘာတာဝန်မှ မယူဘဲ မပြောမဆို တပ်ဆုတ်တော့ တာပါပဲ။
အဲသည်နေ့မနက်က ဘကြီးတို့မိသားစုလည်း ဘူးသီးတောင်သင်္ဘောဆိပ်ကို လာကြည့် သေးတယ်။ ဆိပ်ခံမှာရှိနေတဲ့ သင်္ဘောနှစ်စီးအနက် အင်ဂျင်ရှိနေတဲ့ Progress သင်္ဘော ပေါ်ကို ဘီအိုင်အေတပ်သားတွေ တက်ကြတယ်။ အရပ်သားတွေလည်း လုတက်မယ် လုပ်တော့ သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ သေတာတော့ မရှိဘူး။ ဒဏ်ရာလေး ဘာလေး ရတာပဲ ရှိတယ်။ Progress က ဆွဲသွားမယ်ဆိုပြီး ကြိုးချည်တွဲထားတဲ့ ” မီးဝ ” သင်္ဘောပေါ်ကို အရပ်သားတွေ အလုအယက်တက်ကြပြန်တယ်။ သင်္ဘောက နှစ်ထပ်သင်္ဘောဆိုတော့ သင်္ဘောဝမ်းခေါင်းထဲဆင်းသွားတဲ့လူတွေ၊ သင်္ဘောခေါင်းမိုးပေါ် တက်သွားတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆိုရင် သင်္ဘောပေါ်မှာ လူလွှာလေးလွှာအပြည့်အသိပ်ဖြစ်နေတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ ”မီးဝ” သင်္ဘောဝမ်းခေါင်းမှာ အပေါက်တွေဖြစ်နေလို့ ရေယိုတော့ မြုပ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ရှေ့က Progress သင်္ဘောကလည်း ကြိုးတွေ ဖြုတ်ချလိုက်တော့တာပါပဲ။ ”မီးဝ” သင်္ဘော ပေါ်ကနေ ရေထဲခုန်ချနိုင်တဲ့သူတွေက ခုန်ချကြတယ်။အဖြစ်က ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့ ………ပေါက်ပေါက်တွေ အပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ နို့ဆီဗူးခွံ တစ်ခွံရေထဲကို ရေယိုအိကျ နစ်မြုပ် သွားတော့ ပေါက်ပေါက်တွေ အကုန်ရေထဲကို ကြဲပြန့်မျောပါသွားသလိုပဲ။ မြစ်ပြင်ထဲမှာ လူတွေ အကုန်ကြဲပြန့်မျောပါသွားတယ်။ အနည်းဆုံးလူလေးရာလောက် သေတယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဆရာတော်ဦးပညာသီဟအပါအ၀င် လူငါးဆယ်လောက်ကိုပဲ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘကြီးတို့မိသားစု ကတော့ ဦးလေးတစ်ယောက်ပိုင် စက်လှေ ကလေးတစ်စီးနဲ့ လိုက်ခွင့်ရလို့ ရသေ့တောင်မြို့ ကို ရောက်ရှိလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။
ကုလားတွေက တပ်မချောင်းမှာ အခိုင်အခံ့နေရာကနေ …….. ဂျပန်တွေပါ တက်လာရင် ငါတို့တော့ခံနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဆုတ်မလို့ ပြင်နေကြတာ။ ဘီအိုင်အေ တပ်ဆုတ်သွားတဲ့နေ့မှာ တပ်ဆုတ်သွားတာကို သတင်းရတော့ ပထမဦးဆုံး ညပိုင်းမှာ လာပြီး ကင်းထောက်စနည်းနာတယ်။ တပ်ဆုတ်သွားတာ သေချာတော့ ညဆယ်နာရီမှာ လာတိုက်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီကတည်းက ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောနယ်ဟာ ကုလားလက်ထဲကို လုံးလုံးကျသွားပြီးတော့ ဒေသခံရခိုင်တွေဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှကို စွန့်လွှတ် ထားခဲ့ပြီး အသက်လုကာ ကုန်းကြောင်းထွက်ပြေးကြရတော့ တာပါပဲ။ လမ်းမှာ အသတ်ခံ ရတာတွေက အများကြီး၊ ကုလားမယားအပြုခံရတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီး။ စစ်ကာလအတွင်း ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောဒေသမှာ ရခိုင်တစ်ယောက်တစ်ပိုင်းမှ မကျန်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
ဘကြီးကို ၁၉၃၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့ ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ မွေးတယ်။ ကိုယ့် အဖေက ဟိုစဉ်က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဖဆပလ အမတ်၊ ဒေသခံအာဏာရ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင် ဦးစံထွန်းအောင် ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေ စိန့်အန်းကွန်ဗန်း(Saint Ann Convent)ကျောင်း (ယခု စစ်တွေ အထက-၄)မှာ လေးတန်းအောင်တဲ့အထိ နေခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘုန်းတော်ကြီး (Father) တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုချစ်တော့ ကိုယ့်အဖေကို လာပြောတယ်။ မင်းသားကို ငါအင်္ဂလန်ခေါ်သွားပြီး စာတွေဘာတွေသင်ပေးချင်လို့ဆိုတော့ အဖေက ဟေ့ . . . ဟေ့ . . . ငါ့သားကို ပေးမလွှတ်နိုင်ဘူး လို့ငြင်းတယ်။ ဒါနဲ့ အဖေက ဒီပုံ အတိုင်းဆိုရင် ငါ့သားကို အဲဒီကျောင်းမှာ ဆက်ထားလို့ ကတော့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်သွားတော့မှာပဲဆိုပြီး အဖေက ကိုယ့်ကို ကျောင်းနုတ်တယ်။ ပြီးတော့ အထက(၁)ကို ပို့တယ်။
အဲသည် အထက(၁)မှာလည်း ကျောင်းသားတွေက ခဏခဏ သပိတ်မှောက် ကြလွန်းတာနဲ့ အဖေစိတ်ညစ်ရပြန်တယ်။ ကိုယ်လည်း အဲသည် သပိတ်တွေမှာ ရောပါနေတာကိုး။ အဲသည် အချိန်တုန်းက ရန်ကုန်ကိုပို့ပြီး စာသင်တဲ့စရိတ်နဲ့ ဒါဂျီလင်ကို ပို့ပြီး စာသင်တဲ့စရိတ်က မကွာလေတော့ အဖေက ၁၉၅၁-ခုနှစ်မှာ ကိုယ့်ကို ဒါဂျီလင်ပို့ပြီး ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ပညာသင်စေတယ်။
ကိုယ်က အဲသည်တုန်းက ခပ်ပေပေဆိုတော့ ဟိုက်စကူးဖိုင်နယ်မပြီးခင်မှာပဲ ဒါဂျီလင်ကျောင်းကနေ ကိုယ့်ကို ပြန်ပို့ တာ ခံရတယ်။ အိမ်ကို မျက်နှာမပြရဲတဲ့ ကိုယ်ဟာ စစ်တွေတို့ ဘူးသီးတောင်တို့ကို ပြန်မယ့်အစား ရန်ကုန် အထိ လေယာဉ် လက်မှတ်ယူလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသည်လေယာဉ်က ကာကကတ္တား-စစ်တွေ-ရန်ကုန်ကို အစဉ်အတိုင်းပြေးဆွဲတာ။ အဖေက ဘယ်လို ဘယ်ပုံစုံစမ်းပြီး သိသွား သလဲတော့ မသိဘူး။ စစ်တွေလေယာဉ်ကွင်းမှာ ကိုယ့်ကို လာစောင့်နေတယ်။ လေယာဉ် အဆင်းလှေကားရှေ့ တည့်တည့်မှာရပ်ပြီး ဆင်းလာတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲမှာ သူ့သား ပါလေ မလားလို့ ကြည့်ကြည့်နေတာ။ ကိုယ်ကလည်း ကိုိယ့်အဖေမမြင်အောင် လေယာဉ်ပေါ် ကနေ ကွယ်ကြည့်နေတယ်။ ဆင်းတဲ့ လူကုန်သွားပေမယ့်လို့ သူ့သားပါမလာတော့ အဖိုးကြီးက ဒွိဟစိတ်နဲ့ လေယာဉ်ပြုတင်းပေါက်တွေကို လှမ်းကြည့်တော့ ကိုယ်က ငုံ့ပြီး ပုန်းနေရတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်အဖေသာ ဟေ့ ဟေ့ ခဏနေဦး ဆိုပြီး လေယာဉ် ပေါ်တက်ကြည့်ရင် (ဒါမှမဟုတ်) သူက အာဏာလက်ရှိ ဖဆပလ အမ တ်ဖြစ်နေလေတော့ လေယာဉ်စီး ခရီးသည်စာရင်း ကိုသာ တောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပါလာ တာကို တွေ့သွားမှာ မုချပဲ။
ဒီလိုနဲ့ စစ်တွေကို ပြန်ရောက်ရမယ့်အစား ရန်ကုန်က အဖေ့ညီမ ကိုယ့်အဒေါ်အိမ်ကို ကိုယ်ရောက် သွားတယ်။ အဲသည်လို ရန်ကုန်ရောက်သွားပြီး ရန်ကုန်မှာ အထက်တန်း ကျောင်း တက်ရာကနေ အလံနီ စည်းရုံးရေးမှူးတွေနဲ့ တွေ့တော့တာပါပဲ။ ကိုယ့်ကို စည်းရုံးတဲ့သူက ရဲနီအောင်သိန်း။ ရဲနီအောင်သိန်း ကိုယ့်ကို စည်းရုံးတာ အင်မတန်မှ ညင်သာတယ်။ ကွန်မြူနစ် သဘော တရားတွေရဲ့ အခြေခံ အနုမာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနုပဋိလောမကို ကိုယ့်ကိုနားသွင်းတာ အင်မတန်မှ ပညာသားပါလှတယ်။ အရေအတွက်ကနေ အရည်အချင်းသို့ ပြောင်းလဲပုံကို ရှင်းပြတာ ထမင်းအိုးတစ်အိုးတည်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဆူလာပုံဥပမာကို သုံးတယ်။ အဲ……….ထမင်းစား ပြီးတော့ ချီးပါတဲ့အထိ ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်ဟာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲ သွားသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ကွန်မြူနစ်တွေ ရဲ့ အနူ ပဋိလောမ ရုပ်ဝါဒကို နားသွင်းနေတာမှန်း ကိုယ်လုံးလုံးမရိပ်မိဘူး။ နောက်မှ အနူပဋိလောမရုပ်ဝါဒနဲ့ ကိုယ့်ကို တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သခင်စိုး အကြောင်းကို ပြောပြတယ်။ အလံနီပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေကို ရှင်းပြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဟာ ဖဆပါလ ထမီနီအမျိုးသမီး ကိုယ့်အဒေါ်အိမ်မှာနေပြီး အသက်(၂၀)အရွယ်မှာ အလံနီ ပါတီရဲ့ အရံပါတီဝ င်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အဒေါ်ကတော့ လုံးလုံးမရိပ်မိဘူး။
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ညလုံးလုံး ကြေငြာစာရွတ်တွေ လိုက်ကပ်ကြရတာရှိတယ်။ ကိုယ့် အိမ်ရှေ့၊ ကိုယ်အိမ် အနီးအနားနေရာတွေလည်း ပါတာပေါ့။ မနက်ကျရင် မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လိုလို ကိုယ့်အဒေါ်အိမ်ပေါ်ကို ကိုယ်ပြန် ရောက်နေပြီ။ ကိုယ့်အဒေါ် မနက်ပိုင်း အပြင် ကပြန်လာလို့ ဈေးကပြန်လာလို့ ဟေ့…….ဟိုနေရာတွေမှာ အလံနီ ကြေငြာစာရွက် တွေ ကပ်ထားတယ်။ ဘယ်သူလက်သရမ်းသွားသလဲ မသိဘူးဆိုပြီး အဒေါ်ပြောတဲ့အခါ ကျရင် ဟုတ်လားအဒေါ် ဘာညာနဲ့ မှင်သေသေ ဖြီးဖြန်းရာကနေ လက်တွေ့ယူဂျီ သင်ခန်းစာတွေကို စတင် လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့တယ် လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
အပိုင်းနှစ်ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုကြပါရန်။
Previous AZG ရဲ့ သရုပျသကနျအမှနျကို ဆနျးစဈ အံထုတျခွငျး
Next စံရှမေောငျ ၊သို့မဟုတျ၊ လကျနကျခြ ရကပ ကြားတဈကောငျ (အပိုငျး နှဈ)
NLD ရဲ့ ​ကွငွောခကျြ​အမှတျ​ ၁/၁၁/၂၀၁၉ နဲ့ပတျ​သကျ​လို့
အပွဈမဲ့အရပျသားမြား အသတျခံနရေခွငျး နှငျ့ပတျသကျ၍ ၀ိုငျးဝနျးရပျတညျပေးကွပါရနျ တိုကျတှနျးခကျြ